ဗိုင်း ရပ်စ်ကြောင့် တ ရု တ်ပြည် ရွှေလီဂျယ်ဂေါင် မှ မြန်မာများ ပြန်လာကြသော်လည်း သေ ချာ စစ်ဆေးမှုမရှိ – Shwewiki.com
ယ ခုမြင်ရတဲ့ ပုံတွေကတော့ မူဆယ်က ပေးပို့လာတဲ့ တရုတ်ပြည် ရွှေလီဂျယ်ဂေါင်မှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေပါ သူတို့တွေလည်း အဲ့ရောဂါကိုကြောက်လို့ ပြန်လာကြတာပါ။ ဒီဘက်က နယ်စပ်ဂိတ်မှာ စစ်ဆေးသူတွေကလည်း အဖျားတိုင်းယုံဘဲ။ အဖျားမရှိရင် အကုန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ နဲနဲတော့ အံ့ဩနေမိတယ်။
ဩဇီမှာတော့ တရုတ်ပြည်က ပြန်လာတဲ့သူတွေကို အဖျားရှိရှိ၊ မရှိရှိ မြို့ထဲပေးမဝင်ပဲ ကျွန်းပေါ်မှာထားပြီး အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ စောင့်ကြည့်မယ်။ ရောဂါမရှိတာ သေချာပြီလို့ စိတ်ချရမှ မြို့ထဲပေးဝင်မယ်တဲ့ တရုတ်ပြည်ကို အလည်သွားခဲ့တဲ့ ကလေးတွေကို ဩဇီကကျောင်းတွေက လတ်တလော လာမတက်ဖို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။
ဒါတောင် ဒီနိုင်ငံတွေမှာ ရောဂါစစ်ဆေးတာ အဆင့်မြင့် နည်းပညာတွေ အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးနေကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်မချလို့ တရုတ်ပြည်က ပြန်လာသူတွေကို ဩဇီနိုင်ငံသားဖြစ်ပေမယ့် မြို့ထဲပေးမဝင်ပဲ အကုန်အကျခံပြီး ကျွန်းပေါ်ပို့ထားတာပါ။
ကျတော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့က အရမ်းကို ပေါ့လျှော့လွန်းနေတယ်။ အဖျားတိုင်းတာ သာမိုမီတာတိုင်းတဲ့ စက်တစ်လုံးနဲ့ပဲ လက်တလော အဖျားမရှိရင် ပေးဝင်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ့လူတွေက မြန်မာနိုင်ငံ နေရာဒေသ အသီးသီးကို ပြန်ကြမှာ။ သူတို့ကို ဘယ်ပြန်မှာလဲ မသိသလို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမယ့်သူလည်း မရှိတော့ဘူး။
အကယ်၍သာ ဒီလူတွေထဲက တစ်ယောက်တလေ လတ်တလောမှာ အဖျားမရှိပေမယ့် မပြောကောင်း မဆိုကောင်း ရောဂါပါလာရင် ဘယ်သူသိကြမလဲ …. ခုမူဆယ်ဆေးရုံကြီးမှာလည်း ဆေးဝါးလုံလောက်အောင် မရှိဘူးလို့ ဆရာမတွေက ရင်ဖွင့်နေကြပါတယ်။
တရုတ်ပြည်နဲ့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်နေတဲ့ ကျတော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို ကမ္ဘာကတောင် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေချိန်မှာ မပေါ့ဆကြစေချင်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လို ကာကွယ်ရေးတွေ လုပ်နေလည်း လေ့လာကြစေချင်ပါတယ် နယ်စပ်က ဆေးရုံတွေမှာ ဆေးဝါးလုံလောက်အောင် ချပေးစေချင်ပါတယ်….
ယ ခုမွငျရတဲ့ ပုံတှကေတော့ မူဆယျက ပေးပို့လာတဲ့ တရုတျပွညျ ရှလေီဂယျြဂေါငျမှာ အလုပျလုပျနကွေတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား အလုပျသမားတှပေါ သူတို့တှလေညျး အဲ့ရောဂါကိုကွောကျလို့ ပွနျလာကွတာပါ။ ဒီဘကျက နယျစပျဂိတျမှာ စဈဆေးသူတှကေလညျး အဖြားတိုငျးယုံဘဲ။ အဖြားမရှိရငျ အကုနျလှတျပေးလိုကျတယျဆိုတော့ နဲနဲတော့ အံ့ဩနမေိတယျ။
ဩဇီမှာတော့ တရုတျပွညျက ပွနျလာတဲ့သူတှကေို အဖြားရှိရှိ၊ မရှိရှိ မွို့ထဲပေးမဝငျပဲ ကြှနျးပျေါမှာထားပွီး အခြိနျကာလတဈခုအထိ စောငျ့ကွညျ့မယျ။ ရောဂါမရှိတာ သခြောပွီလို့ စိတျခရြမှ မွို့ထဲပေးဝငျမယျတဲ့ တရုတျပွညျကို အလညျသှားခဲ့တဲ့ ကလေးတှကေို ဩဇီကကြောငျးတှကေ လတျတလော လာမတကျဖို့ ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးဌာနက အမိနျ့ထုတျထားတယျ။
ဒါတောငျ ဒီနိုငျငံတှမှော ရောဂါစဈဆေးတာ အဆငျ့မွငျ့ နညျးပညာတှေ အသုံးပွုပွီး စဈဆေးနကွေတာပါ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ကိုယျတိုငျ စိတျမခလြို့ တရုတျပွညျက ပွနျလာသူတှကေို ဩဇီနိုငျငံသားဖွဈပမေယျ့ မွို့ထဲပေးမဝငျပဲ အကုနျအကခြံပွီး ကြှနျးပျေါပို့ထားတာပါ။
ကတြျောတို့နိုငျငံအနနေဲ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှု့က အရမျးကို ပေါ့လြှော့လှနျးနတေယျ။ အဖြားတိုငျးတာ သာမိုမီတာတိုငျးတဲ့ စကျတဈလုံးနဲ့ပဲ လကျတလော အဖြားမရှိရငျ ပေးဝငျလိုကျတယျ။ အဲ့ဒီ့လူတှကေ မွနျမာနိုငျငံ နရောဒသေ အသီးသီးကို ပွနျကွမှာ။ သူတို့ကို ဘယျပွနျမှာလဲ မသိသလို စောငျ့ကွညျ့စဈဆေးမယျ့သူလညျး မရှိတော့ဘူး။
အကယျ၍သာ ဒီလူတှထေဲက တဈယောကျတလေ လတျတလောမှာ အဖြားမရှိပမေယျ့ မပွောကောငျး မဆိုကောငျး ရောဂါပါလာရငျ ဘယျသူသိကွမလဲ …. ခုမူဆယျဆေးရုံကွီးမှာလညျး ဆေးဝါးလုံလောကျအောငျ မရှိဘူးလို့ ဆရာမတှကေ ရငျဖှငျ့နကွေပါတယျ။
တရုတျပွညျနဲ့ အိမျနီးခငျြးဖွဈနတေဲ့ ကတြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ ဒီရောဂါဆိုးကွီးကို ကမ်ဘာကတောငျ စိုးရိမျထိတျလနျ့နခြေိနျမှာ မပေါ့ဆကွစခေငျြပါဘူး။ ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ နိုငျငံတကာမှာ ဘယျလို ကာကှယျရေးတှေ လုပျနလေညျး လလေ့ာကွစခေငျြပါတယျ နယျစပျက ဆေးရုံတှမှော ဆေးဝါးလုံလောကျအောငျ ခပြေးစခေငျြပါတယျ….